EyeDwarha 4, 2018 admin
Binance lityale $ 2.5m Australian kuqaliso TravelbyBit
Binance umemezele a $2.5 million mali Australian kuqaliso zokuhamba TravelbyBit ungabonisa ukuqalisa blockchain-based, point-of-yentengiso (POS) inkqubo yentlawulo kuzo moya ezinkulu ehlabathini jikelele. Abahambi baya kuba nako ukuya abathengisi bendawo moya khetha ngamazwe kwaye usebenzise KDE mobile njenge Coinomi eentlawulo POS. “Akukho oza ngaphezu kokuba ukwazi ukusebenzisa crypto wakho xa uhamba, nje emva kokuba umhlaba kwilizwe langaphandle, apho ukuze ube imali yendawo,” Changpeng Mark, CEO of Binance, kucacisiwe kule isaziso.
ubambiswano TravelbyBit kunye Binance kuzakuvumela siqalo ukuba aqalise inkqubo yalo POS blockchain-based, kungokunje zisetyenziselwa e Brisbane moya, kwezinye izikhululo ngamazwe ehlabathini lonke, ukuze abahambi ungakwazi ukuhlawula kunye Bitcoin phesheya moya zehlabathi, ngaphandle kwesidingo exchange iimali eyake ngamazinga ezibizayo.
phezu 1,500 ATM Bitcoin ukuba kuqashwe eArgentina ukuphendula ukunyuka okuxhomis
Ngokutsho nabameli abasuka Athena Bitcoin and Odyssey Group, yi ekupheleni 2018 Argentina uya kuba nempi 30 ATM Bitcoin. Loo nombolo izakuxhumela khona malunga 150 ku q1 2019, kwaye ukuba ngaphezu 1,500 yi ekupheleni 2019. Oku kwanda crypto kwelo lizwe South American kuza phakathi an sobunzima bezoqoqosho ebone ixabiso nto lwemali kazwelonke, i peso, liphele kakhulu.
US esekelwe Athena Bitcoin, inkampani onceda kuphuhliso kunye nokusebenza ATM cryptocurrency, uqala ngenyanga Argentina nje eyadlulayo e Buenos Aires. Argentina i indawo efanelekileyo ukuze-ATM Bitcoin kuba kwamaxabiso of nto imali yesizwe - ethe yalahleka ngaphezu 50% ixabiso lalo dollar kangaka 2018 - kulindeleke ukuba idlule 40% Ekupheleni kwaloo nyaka. umphathi imisebenzi Athena Bitcoin ngenxa Argentina, wabe Galeazzi, Wathi ngombono kwabo, le meko ebe lilishwa yezoqoqosho ithuba lokukhula omkhulu kushishino cryptocurrency le.
Bithumb ukuqalisa i exchange eyaba
Mhlawumbi ziphefumlelwe enkulu kutshintshiselwano cryptocurrency ehlabathini, Binance & izicwangciso zalo okuqalisa exchange eyaba (codex) yi 2019, Bithumb, iqonga urhwebo asethi digital ezinkulu eMzantsi Korea, ibhengeze izicwangciso zayo ukuze kuqhutywe codex kwiinyanga ezizayo. Bithumb codex, ekuya kulindeleka ukuba bajolise imarike cryptocurrency zehlabathi, iza kuphehlelelwa phantsi oluncedisayo lwangaphesheya ngokutshintshiselana ngaphandle kwe South Korea.
Umthombo close to Bithumb codex waxelela iincwadi endawo ukwandisa isiseko wayo umsebenzisi ngamazwe, exchange kumiselwa isicwangciso kwithuba eliphakathi ngokwandisa ngokupheleleyo asilonaniselwano amagunya kwiinyanga ezizayo. "Bithumb yenye eziphambili tshintshiselwano lwehlabathi ngokwemiqathango imicimbi kodwa kuyinyaniso ukuba abaninzi abasebenzisi bayo Korean. Isigqibo yakutshanje kubonakala ukuba isicwangciso yenkampani ukuba akhuphisane nabanye ukutshintshiselana eziphambili kurhwebo lwehlabathi ngokuvula asilonaniselwano amagunya elifumana ingqalelo kurhwebo lwehlabathi,"Uthe umthombo. ngaphambili, kwi-ndlebe CNBC, Binance CEO Changpeng Mark lowu ukuba ukukholelwa kutshintshiselwano amagunya ke imarike ye crypto i.
breaks belandela 50% okokuqala ngqa
ilandelwe kuye lukhula ngokuthe ngcembe kule minyaka 12 iinyanga, kwaye namhlanje SegWit ukwamkelwa iye yaluphumelela 50% uphawu. Ngaphezu kwesiqingatha zonke iintengiselwano Bitcoin usebenzisa SegWit.
Ukuze ufumane transactions zitshiphu, yiyo i, ukufumana isaphulelo SegWit, umsebenzisi inako ukufumana Bitcoin ukuya SegWit idilesi isipaji(ziqala nge 3), yaye emva koko bachithe ezo bitcoins efanayo ukufumana isaphulelo. kwakhona, uthumela ukuba idilesi SegWit ayibizi ngokunjalo.
Bank of America ucinga blockchain ingaba imarike $ 7B
Bank of America umhlaziyi zophando ziye kwangaphambili ukuba iteknoloji blockchain unokumela ishishini dollar-multi billion phantsi endleleni, kwaye kuba yinzuzo ethile kwiinkampani eziphambili ezifana Amazon ne Microsoft. Le abahlaziyi ekugqibeleni imarike blockchain iyaziseka iyonke Ayembetha $7 billion, kodwa akubangakho ixesha elithile ekukhuleni lemarike ukususela obu bugcisa alikafiki kabanzi.
CNBC ingxelo ukuba uqikelelo emarikeni lwesenzeko kwingcinga yokuba 2% of iiseva eyayiza kusetyenziselwa ukubaleka blockchain. Kunothi kubaxhasi on Tuesday, Bank of America uphando Umhlalutyi blige Rangan wabhala ukuba iinkampani ezifana Amazon akwazi ukuhlanganisa blockchain ukufezekisa umsebenzi ngemiyinge emincinci kunye nokwandisa imisebenzi ilifu computing. Bank of America uthe iinkampani ezifana Oracle, IBM, Salesforce, VMware, Redfin, Zillow, kunye LendingTree zonke eme ukuze afumane uncedo ukudibanisa zisasazwe technology ileja.
Bitcoin qalisa Acinq uphakamisa $ 1.7M kabini phantsi Lightning
Lightning ayikho nje big hit nabaphuhlisi, kwezithembiso ubuchwepheshe Bitcoin ngoku itsale a ingqalelo encinane bezimali. Acinq, enye zokuqala phambili ukusebenza kumsebenzi womnatha umbane, umaleko-kwinqanaba eliphezulu benenjongo ukuba kunyuswe inani transactions Bitcoin shoka, iye bavale $1.7 million mali ngeenxa ikhokelwa ngu Serena Capital, ne nxaxheba kwi Talend co-umsunguli Bertrand Diard, Sebastien Lucas, Alistair Milne and Snapcar umsunguli Yves Weisselberger.
Ngenxa yokuba le mali, Umbane Labs ayisekho kuphela lokulungiselela kuphela azinikele umbane ukuba abenakho zigutyula imali yemizamo yawo. Ekubeni yasungula iminyaka embalwa emva, nenkampani Paris-esekelwe ibe ngomnye kakhulu ebalulekileyo enotyhalo obanzi ukwakha nemibane yoyilo. Kuye wakha Eclair, omnye Ukusetyenziswa ezintathu software umbane ecaleni kwabo yi Umbane Labs and Blockstream, kwakunye ne Eclair Wallet, umbane isipaji ithandwa kakhulu ukuza kuthi ga ngoku. Acinq co-ngumseki kunye CEO Pierre-Marie Padiou uthe. “Ngale kuphakamisa, Siyavuya kakhulu ukuba babe nako ukwenza okuninzi ngezibonelelo ngaphezulu. Siza kukwazi ukwenza iinkonzo nokuba kuhle kakhulu umbane. Oku ayilunganga kuphela kuthi kodwa ngumbane ngokubanzi kunye ukutyhala ukwenziwa phambili.”
Ingxelo Daily Market Kraken for 03.10.2018
$122M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
BTC Ready To Move!! kodwa, There...
Post Next:Blockchain News 05.10.2018
Caroline Mercury uthi:
EyeNkanga 21, 2018 e 5:18 AM
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog is in the exact same niche as yours and my visitors would really benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Masinwabe!